माघ २० देखि २६ गतेसम्मको साप्ताहिक राशीफल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
माघ २० देखि २६ गतेसम्मको साप्ताहिक राशीफल
यो साता राम्रो रहनेछ । घरमा खुसीको वातावरण हुनेछ । आईतबार र सोमबार अरुको कमजोरी वा अरुले गर्दा तपाँईलाई फाइदा होला । व्यापार व्यबसायमा पनि साझेदारहरुको सहयोगले गतिलै काम गरिनेछ । आफूले गरेका कामहरुको अरुले उच्च मुल्याङ्कन गर्नाले मनोबल बढनुका साथै पदलाभ पनि हुनेछ । बैदेशिक व्यापार वा रोजगारमा लागेका व्यक्तिहरुको बिदेश यात्राको संभावना पनि रहेको छ । भाग्यले गर्दा अपेक्षित लाभ पाईनेछ । तर आफ्नो एकोहोरो बुद्धिले गर्दा नसोचिएको ठाउँबाट समस्या वा चुनौति तपिन सक्ने हुनाले चनाखो रहनुहोला । वैबाहिक जीवन पनि राम्रो नै रहनेछ ।
साताको मध्य देखि समय राम्रै बित्नेछ । तर सफलता पाउन भने कडा संघर्ष नै गर्नु पर्नेछ । कठिन समय भएपनि लगनशिल भई कामगरे समयले साथ दिनाछ र यी सबै अफ्ठ्याराहरुबाट पार पाईनेछ । कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुले तपाँईको कुरा काटने र नीचो देखाउन सक्ने हुनाले आफ्नो मनोबल उच्च राख्नुहोला । पारिवारिक भोज भतेर र धार्मीक कार्यहरुमा सहभागी हुनाले मनमा तृप्ती अनुभव हुनेछ । आम्दानि बढाउन दह्रो प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ । जीवनसाथीले बिस्तारै सोचे अनुरुप साथ दिनाले मन प्रशन्न हुनेछ । आमाको स्वास्थले भने चिन्ता बढाउन सक्नेछ ।
साताको शुरुमा कामहरु सजिलै हुनेछन् भने सोमबार र मंगलबार चिन्ता बढ्ने गरि अरुको लागि समस्याको सामना गर्नु पर्नेछ । तर असाधान भएर चुनौतिलाई बेवास्ता गरे पहिले गरिएका गलत काम वा दुस्कर्मको सजाय पाईनेछ । सरकारी पक्षबाट माघ महिनाभर कुनै सहयोग पाईने छेन् बरु दुख पाईने हुनाले सरकार सम्बन्धि कामहरु केही समय पछिका लागि सार्दा राम्रो होला। व्यापार व्यावसायमा मन्दी अझै केहीदिन हुनसक्ने भएकाले सजग रहनु होला । तापनि आशा नगरिएका व्यक्तिबाट र नसोचिकएको कामबाट आकस्मीक लाभ हुनाले केही राहत भने महशुस हुनेछ ।
साताको शुरुमा समय राम्रै बित्नेछ । गर्न खोजिएका धेरै कामहरुमा अढ्चनहरु आउने र असफल हुनसक्ने हुनाले सावधान रहनु होला । अति आत्मबिश्वासी भएर काम गरे धोका पाईनेछ । सुनौतिको सामना गर्नका लागि आफ्नो ब्यापारीक रणनितीहरु सोही अनुरुप बलियो बनाउनु जरुरी छ । अपमानजनक स्थिती आउनु भन्दा पहिले नै साझेदारहरु संगको विबाद मिलाउने कोशिस गरे ब्यवसायमा असर गर्नेछैन्। आम्दानी यो समयमा सामान्य मात्रै हुनेछ । प्रणयसुख भएतापनि जीवनसाथी संग विबाद बढेर बैमनस्यता पनि हुन सक्ने हुनाले आफ्नो क्रोध तथा बोलीमा नियन्त्रण राख्नुहोला। पित्तजन्य विकारले पेटको समस्या बढाउने छ तसर्थ खानपानमा ध्यान दिनुहोला।
बोलिमा संयमता अपनाए साता राम्रै बित्नेछ । साताको शुरुवातमा आफूले सोचे अनुरुप सफलता पाउन सकिनेछ । कसैले दिएको उपहारले मन प्रसन्न बनाउने छ । टाढाका मित्र संगको भेटघाट पनि हुनसक्नेछ । तपाँईका शत्रुहरु बढेका भए पनि तिनीहरुलाई सजिलै परास्त्र गर्न सक्नु हुनेछ । गरिएका काममा पनि स्थरता आउने छ भने घरका आवश्कताहरु पुरा हुनेछन्। तपाँई प्रतिस्पर्धीहरुका चुनौतिहरुलाई सजिलै सामना गर्न सक्नुहुनेछ । प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कामहरुमा सफलता पाईनेछ । ब्यापार व्यवसाञ बाट राम्रै लाभ हुनेछ तर बढेको खर्चले तनाव हुनसक्ला । सन्तानको स्वास्थको स्थिती केही बिग्रन सक्ने हुनाले सचेत रहनुहोला।
शनिबार मनमा बैराग्यता महशुस भए पनि बाँकि साता राम्रै बित्नेछ । शुरुमा खर्च केही बढे पनि लाभ पनि बढ्नाले बचतमा बृद्धि नै हुनेछ । तर अचल सम्पतिमा केही सामान्य बिवाद भने आउन सक्नेछ । आफन्तहरु क्रोधी ब्यबहारले टाढा हुनसक्ने भएकाले आफ्नो क्रोध नियन्त्रण गर्नुहोला । यो समयमा अति आत्मबिश्बासी हुनबाट पनि जोगिनु होला । बोलिमा असंयमता र बेसुरपनाले आफै मुर्ख बनिन सक्ने हुनाले वाताबरणको बिचार गर्दै सोचेर मात्रै बोल्नुहोला । आम्दानीको स्थिती राम्रै रहनेछ भने बचत पनि बिस्तारै बढ्नेछ । सन्तानको स्वास्थमा केही समस्या आउनसक्ने भए पनि उनीहरुको प्रगतिले खुसी बानउनेछ।
साताको शुरुवात त्यति राम्रो नहुन सक्छ तर मंगलबार देखी बाँकी साता राम्रै बित्नेछ । शुरुमा बिपरित लिङ्गी द्वारा ठगिन सक्ने भएकाले साबधान रहनुहोला । चुनौतिहरु आएपनि आफूले बचन दिइका कुराहरु जसरी पनि पुरागर्न कोशिस गरिनेछ । आफ्नो काम बनाउन रुखो बोलि नबोलेके बेस हुनेछ । जिम्मेदारी बढेको महशुस हुने हुनाले कामहरु धैर्यपूर्वक गर्नु पर्नेछ । घरमा मनमुटाबव भए पनि पारिवारिक जमघटले केही प्रशन्नता दिनेछ । दुर्घटनाको योग भएकोले सवारी साधन चलाउँदा बिशेष ध्यान दिनुहोला । जीवनसाथीको स्वास्थ स्थिति बिग्रन सक्ने हुनाले ध्यान दिनुहोला । आफ्ना भाईबैनिहरु संग विबाद नगरे उनिहरुले राम्रै सहयोग गर्नेछन्।
साता उत्साहप्रद हुनेछ। ठुला काम गर्ने उत्साह तथा द्रिढता बढ्नेछ। पहिले रिसाएका नातेदारहरुले पनि सर(सहयोग गर्ने छन्। तपाँईको शंकालु स्वाभावले कामगर्ने उत्साहमा कमी ल्याउन सक्छ। बढेको क्रोधलाई नियन्त्रण गरि द्रिढ भएर लागेमा ठुलो काम गर्न अवसर पाईनेछ। लाभका स्रोतहरु मनग्यै बढ्नेछन्। जीवनसाथीको सहयोगले तपाँईलाई काममा ठुलै सहयोग मिल्नेछ। प्रणय सुख पनि राम्रै संग पाईने छ। तपाँईले गरेका कामहरुको प्रशंसा पनि हुनेछ। जीवनसाथीको स्वास्थ भने कमजोर हुनसक्नेछ।
साताको शुरुमा मानसिक अशान्ती र तनाव बढ्न सक्नेछ भने मंगलबार देखी समय केही सकारात्मक हुनेछ । शनिको प्रभावले आफ्नो योजनालाई कार्यान्वयन निकै बढी मेहनत गर्नु पर्नेछ । काम गर्न खोज्दा आउने बिभिन्न अबरोधहरुले क्रोधको मात्रा बढ्नेछ । आफन्तसंगको बिवादले सम्पतिमा हानी पुग्ने हुनाले सचेत रहनुहोला । तपाँईको धनमाल हराउन तथा चोरी हुनसक्ने हुनाले चनाखो रहनु होला। तपाँईको जीवनसाथीले सोचे अनुरुप साथ दिनाले केही हलुका अनुभव हुनेछ। बिदेशमा अध्ययनको लागि सन्तानहरु सहजै जान सक्नेछन्। आम्दानीका हिसाबले समय राम्रो छ। आफ्नो तथा जीवनसाथीको स्वास्थमा समस्या आउने सम्भावना रहेको हुनाले सचेत रहनुहोला।
साता सोमबार देखी राम्रै बित्नेछ । आफ्नो कमजोरी थाहा पाएर अरुले फाईदा लिनसक्ने हुनाले सचेत रहनुहोस। तपाँईको ईर्स्या गर्नेले घरको सुखशान्ती भाडन सक्ने हुनाले अरुको कुरा नसुन्नु होला । ब्यर्थको यात्राले नोक्सानी मात्रै दिनेहुनाले यस्तो यात्रा नगर्नुहोला । मनमा द्वन्द बढनाले कुनै कामको पनि निर्णयमा बिलम्ब हुनेछ । मन खालि मोजमस्तीमा जानसक्ने भएकोले आफुलाई संयमित राख्नुहोला । ब्यापारको बिस्तार गर्न मन लागे पनि पुंजीको प्रबन्ध अलि ढिलोगरि मात्रै हुनेछ । आम्दानी भने यो समयमा बलियो हुँदै जानेछ।
बुधबार देखी मात्रै साता सामान्य हुनेछ । शुरुमा बिभिन्न समस्याहरुले गर्दा निराशा अनुभव हुनेछ । खर्च बढे पनि निर्माण ब्यबसायमा लागेकाहरुलाई यो समय भाग्यशाली हुनेछ । बैदेशिक व्यापार गरिरहेका लागि पनि यो समय सुनौलो रहेनेछ। काममा लगनशिलता वा दक्षता अनुरुप सफलता पाईनेछ। तर कर्मचारीवर्गका लागि यो समयमा बिनालाभ काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आफूले गरेको प्रयास खेर जानाले मानसिक अशान्ती हुनेछ। यो महिना तपाँईको जीवनसाथीको स्वास्थले तपाँईलाई तनाव दिनेछ । तर बिभिन्न समस्याका बाबजुद दिगो आम्दानीको स्रोत फेला पर्न सक्नेछ।
शुरुमा साता राम्रै बित्नेछ तर बुधबार अपराह्न देखि समय अलि कठिन हुनसक्छ। कामको आलोचना बढेको भएतापनि काममा पदोन्नति र प्रशंसा पाईनेछ। घरमा बिलासिताका सर-सामानहरु थपिनेछन्। नयाँ कामका अवसरहरु पनि प्राप्त हुनेछन्। पहिला गरिएका कामले अहिले आएर लाभ दिन सक्नेछ। लाभमा मात्रै ध्यान दिनाले कार्यस्थलमा अपमान पनि हुनसक्नेछ। कामको बोझ आगामी दिनहरुमा कम हुँदै जानेछ। बढेको आम्दानीको स्रोतले मनमा आनन्द दिनेछ। मातापिताको स्वास्थ निकै बिग्रन सक्ने हुनाले सावधान रहनुहोला।